बेहुली बन्दा नेपाली अभिनेत्री, को कस्ता देखिए ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
बेहुली बन्दा नेपाली अभिनेत्री, को कस्ता देखिए ?
अभिनेत्री निशा अधिकारीले असार १६ गते क्रिकेटर शरद भेष्वाकरसँग लगन गाँठो कसेकी छिन् । आफन्त र निकट साथीहरुको उपस्थितिमा विवाह गरेकी निशाका केही तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका छन् जसमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छिन् । निशाको विवाह भएको यहि अवसरमा आज हामी तपाईँलाई अन्य केही अभिनेत्रीहरु बेहुली बन्दा कस्ता देखिए तस्बिरमा देखाउँदैछौँ ।
रीमा विश्वकर्माले लण्डनमा बसोबास गर्दै आएका रोबर्ट बिश्वकर्मासँग विवाह गरेकी हुन् । विवाह पछि रोबर्ट बेलायतमै छन् भने रीमा नेपालमै रहेर कलाकारितालाई समय दिईरहेकी छिन् ।
भारतीय व्यवसायी प्रसुन झुन्झुनवालासँग विवाह गरेपछि हर्षिका भारतको कोलकत्तामा बस्दै आएकी छिन् । प्रसुन मोबाईल कम्पनीका मालिक हुन् ।
पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री झरन बज्राचार्यले भारतीय मूलका मलेसियन व्यवसायी राहुल अग्रवालसँग विवाह गरेकी छिन् । राहुलसँग विवाह गरेर छोराकी आमा बनिसकेकी झरना विवाह पछि मलेसियामै बसोबास गर्दै आईरहेकी छिन् ।
सुमिनाको विवाह पाईलट रोशन सापकोटासँग भएको छ । सुमिनाले पहिले ईन्गेजमेन्ट भईसकेका एक प्रेमीलाई छाडेर पाईलट रोशन सापकोटालाई अंगालेकी हुन् । रोशनसँग विवाह गरेर एक सन्तानकी आमा बनिसकेकी सुमिनालाई नेपाली सिनेमाकी विवादित अभिनेत्रीको रुपमा पनि लिईन्छ ।
अभिनेत्री उषा पौड्यालको अभिनेता शुधांसु जोशीसँग विवाह भएको छ । उषा अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् ।
अभिनेत्री मिथिला शर्माले पूर्व प्रहरी प्रमुख मोतीलाल बोहोरासँग विवाह गरेकी छिन् । उनले ५० वर्षको उमेरमा ७४ वर्षका मोतीलालाई श्रीमान् रोजकी हुन् ।
रेजिना उप्रेती बेलायतमा बसोबास गर्दै आईरहेका सुरज पोखरेलसँग लगन गाँठो कसेर एक छोरीकी आमा पनि बनिसकेकी छिन् ।
नायिका स्वस्तीमा खड्का र निर्देशक निश्चल बस्नेतले ७२ साल फागुनमा लगन गाँठो कसेका हुन् । निश्चल र स्वस्तीमाको उमेरमा १४ वर्षको अन्तर छ ।
मोडेल तथा अभिनेत्री सिम्पल खनालले निर्देशक प्रशन्न पौड्यासँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर भारतीय मुलका नदिनसँग दोस्रो विवाह गरेकी छिन् ।